अदालतको निर्णयः श्रीमतीले सिन्दुर नलगाउनुको अर्थ उनी वैवाहिक जीवन अघि बढाउन चाहन्नन् - Khabar Break
अदालतको निर्णयः श्रीमतीले सिन्दुर नलगाउनुको अर्थ उनी वैवाहिक जीवन अघि बढाउन चाहन्नन्
भारतको गुवाहाटी हाइकोर्टले श्रीमतीले सिन्दुर र चुरा लगाउन अस्विकार गर्नुको अर्थ उनी आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई जारी राख्न नचाहेको भनेर अर्थ्याएको छ । साथै यसलाई सम्बन्धविच्छेद दिने आधार पनि मानेको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार एक व्यक्तिले गुवाहाटी हाइकोर्टमा सम्बन्धविच्छेदको याचिका दर्ता गरेका थिए । यसमा चीफ न्यायाधिस अजय लाम्बा र न्यायधिस सौमित्र सैकियाले श्रीमतीले सिन्दुर लगाउन अस्विकार गर्नुलाई एक प्रमाणको रुपमा माने ।
चुरा नलगाउनुको अर्थ विवाह नमान्नुः
बेन्चले आफ्नो निर्णयमा भन्यो, ‘हिन्दु रितिरिवाजको हिसाबले विवाहित महिलाले यदि सिन्दुर लगाउदिनँ र चुरा लगाउँदिनन् भने उनी अविवाहित जस्तै देखिन्छिन् र यो प्रतिकात्मक रुपमा विवाहलाई अस्विकार गर्नु हो । यस्तो गर्ने महिलाको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ कि उनी आफ्नो श्रीमानसँग आफ्नो वैवाहिक जीवन जारी राख्न चाहन्नन् ।
अदालतले यस्तो अवस्थामा श्रीमान् श्रीमतीसँग बस्नु महिलाद्वारा श्रीमान् र उनको परिवारलाई प्रताडना दिएको मानिनेछ ।
‘फ्यामिली कोर्टले मूल्याङ्कनमा गल्ती गर्यो’
फ्यामिली कोर्टले यो मामिलामा प्रमाणको मूल्याङ्कन सही दिशामा नगरी गल्ती गरेको अदालतले बताएको छ ।
वास्तवमा फ्यामिली कोर्टले श्रीमानद्वारा दर्ता गरिएको सम्बन्धविच्छेदको निवेदन खारेज गरेको थियो । अपिल गर्ने व्यक्तिको विवाह सन् २०१२ मा भएको थियो । त्यसपछि श्रीमान्–श्रीमान् चाँडै नै अलग्गिएका थिए । महिलाले घरेलु हिंसाको आरोप लगाएकी थिइन् भने श्रीमानले सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिएका थिए ।
सी जिन्पिङः तीन दशकमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले गरेको पहिलो तिब्बत भ्रमणको ‘बाछिटा नेपालसम्म’, भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
अफगानिस्तानमा हवाइ आक्रमण, ३० जनाको मृत्यु
भारतमा ३९ हजार नयाँ सङ्क्रमित थपिए
अष्ट्रेलियाको राजधानी सिड्नीमा संकटकाल घोषणा
गाडी कि विमान ? उड्ने कारको ३५ मिनेटको उडान परीक्षण (भिडियोसहित)
आहा ! ओलम्पिक उद्घाटनका दृष्यहरू(फोटोसहित)
चीनको हेनान प्रान्तमा बाढी र डुबानका कारण ५६ जनाको मृत्यु
चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङ पहिलो पटक स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा
चीनमा बाढीमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ३३ पुग्यो